Politika · Avrily, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Avrily, 2018
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Avrily, 2018
''Nanamarina ny fanjakana Filipina fa ilaina maika ny fandaniana ilay volavolan-dalàna manohitra ny fampihorohoroana. Naneho ny ahiahiny ny Mpanohitra fa raha toa ka lasa lalàna ilay volavolan-dalàna dia hoararaotin'ireo mpitarika mba hanaporetana ny fanoherana ara-drariny.''
Mandehandeha Any Ivelany Ilay Sainam-pirenena Voarara, Miloko Fotsy-Mena-Fotsy An'i Belarosia
Eoropa Afovoany & Atsinanana 29 Avrily 2018
Fanehoan-kevitra manoloana ilay saina ofisialin'i fanjakana Belarosia nanomboka ny taona 1991 ka hatramin'ny taona 1995. Taorian'ny fitsapankevi-bahoaka nisafotofoto ny 14 May 1995, nandrara azy io ny filoha Aleksandr Lukashenko ary namerina nanova ny saina Belarosia ho toy ny tamin'ny andron'ny Sovietika.
Olona an'arivony no mety ho very asa sy voafindra toerana noho ny drafitry ny governemantan'i Filipina hanakatona ny nosy toeram-pialasasatra Boracay
Azia Atsinanana 28 Avrily 2018
Manao fanentanana ny mponina ao Boracay ao afovoan'i Filipina, ao amin'ny faritanin'i Aklan mba hanohitra ny drafitry ny governemanta hanakatona sy "hanavao" ara-tontolo iainana ny toeram-pialasasatra malaza manerantany ao amin'ny nosy mandritra ny enim-bolana, no sady eo am-panamboarana casino roa mandritra izany.
Azia Atsinanana 27 Avrily 2018
''Mpamono mitohy mitafy fanamiana i Palparan. Raha toa ka manao sarisary momba ny fiasan'ny atidohany sy ny maha-izy azy ary ny 'izy' aminy ireo mpitsabo ny marary saina dia mety ho hitan'izy ireo fa tsy hafa amin'ny fironan'i Jack Ilay Mpanokatra Kibo sy Hitler izy. Foka tanteraka, mamono am-pitoniana sy am-pangatsiahana.''